အဆိုပါမာရီက Short အိမ်တစ်ပထမဦးစွာများအတွက် Glenn Murcutt အကြောင်း
အဆိုပါမာရီက Short အိမ် - Glenn Murcutt ရဲ့ရန်းဥပမာ
by ဂျက်ကီ Craven
ကမ်ဘာပျေါမှာအကျော်ကြားဆုံးဗိသုကာအတော်များများဟာ Single-မိသားစုနေအိမ်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်အတူစမ်းသပ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုစတင်ဖို့။ ဗြိတိန်ဖွားသြစတြေးလျဗိသုကာပညာရှင် Glenn Murcutt မျှချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ Murcutt အစောပိုင်း 1970 ခုနှစ်တွင်သူ၏ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်တဦးတည်းအဘို့, ကိုလည်း Kempsey လယ်ယာအဖြစ်လူသိများသည်မာရီက Short အိမ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ New South Wales ပြည်နယ်ထဲမှာမာရီက Short ရဲ့လယ်ယာအိမ်, သြစတြေးလျ Murcutt ရဲ့ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်တစ်ခုကျောင်းစာအုပ်ဖြစ်လာသည်။
ဗိသုကာ Glenn Murcutt ဒေသခံသစ်နှင့်အတူဆောက်
Glenn Murcutt အားဖြင့်မာရီက Short အိမ်အတွင်းပိုင်း။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. www.ozetecture မှာတူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture ထုတ်ဝေသော Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားစဉ်းစား။ org / 2012 / Marie-Short-Glenn-murcutt အိမျ / (အဆင်ပြေအောင်)
အားလုံး Glenn Murcutt ဒီဇိုင်းများ၌ရှိသကဲ့သို့, ထိုမာရီက Short အိမ်ရိုးရှင်းသော, အလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါကဒေသခံပစ္စည်းများဆောက်လုပ်ထားသည်။ အနီးအနားရှိသစ်စက်ကနေကျွန်းသစ်ဟာဘောင်များနှင့်နံရံဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ချိန်ညှိသံမဏိ louvers အသက်ရှင်သောအာကာသမှတဆင့်လေထု၏စီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်။ အဆိုပါဒီဇိုင်းမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပလူနေမှုနေရာများ-တစ်ဦးထံမှတစ်ဦးမော်ဒန်ရဲ့ချဉ်းကပ်သတ်မှတ်တော်မူကြောင်းကိုအလေ့အကျင့်တစ်ခု Blur ထည့်သွင်း Frank Lloyd Wright 's Prairie ပုံစံနေအိမ်များမှ Mies van der နိုမူဟွန်း s ကို 1950 ခုနှစ်ဖန်' ' Farnsworth အိမ် ။ အဆိုပါရှည်လျားပြီးအနိမ့်ပုံသဏ္ဍာန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သူကတိုက်တေနီယမ်ထဲကလုပ်လေးကိုနှင့်မြှားကဲ့သို့အရပ်စကားမှန်များနှင့်မမျှော်လင့်ဘဲတိကျခိုင်မာစွာနှစ်ဦးစလုံးရဲ့တစ်ဦးဗိသုကာဖန်တီးထားပါတယ် "ဂန္ခေတ်သစ်၏သန့်ရှင်းသောလိုင်းများနှင့်အတူသြစတြေးလျရဲ့ကြပါစေယင်းစတိုင်ရောစပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဂျင်မ် Lewis က, The New York Times သတင်းစာအတွက်ရေးသားခဲ့သည်" ။ "
အဆိုပါမာရီက Short အိမ်ပုံကြမ်း
Glenn Murcutt အားဖြင့်မာရီက Short ၏ overhead ပုံကြမ်း။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. www.ozetecture မှာတူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture ထုတ်ဝေသော Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားစဉ်းစား။ org / 2012 / Marie-Short-Glenn-murcutt အိမျ / (အဆင်ပြေအောင်)
ကနဦးပုံကြမ်းအမြင်အာရုံဗိသုကာပညာရှင် Glenn Murcutt-ဖန်တီးနှစ်ခု "တကွတဲ," အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကအာကာသ၏ကြမ်းပြင်အစီအစဉ်ကိုဒီဇိုင်းပြသထားတယ် "အိပ်ပျော်နေတဲ့ဘို့တ, လူနေမှုအဘို့အခြား။ " ဒီဇိုင်းအားဤချဉ်းကပ်နည်းဥရောပသစ်-ကြီးစွာသောရဲတိုက်နှင့်ဘုံဗိမာန် compartmentalized လူနေမှုဒေသများရှိအချည်းနှီးဖြစ်၏။ ဒါဟာအစဥပမာဒီနေ့ရဲ့ခေတ်မီဒီဇိုင်းများမှာတွေ့ရှိတစ်ခုချဉ်းကပ်မှု, အင့် မေပယ်ကြမ်းပြင် Plan ကို Brachvogel နှင့် Carosso အားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသော Little ကအိမ်များထဲကတစ်ခုကနေ။
မူရင်း 1975 ခုနှစ်ကြမ်းပြင်အစီအစဉ်ကိုဒီပုံကြမ်းအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
Glenn Murcutt ကဒီဇိုင်းမူရင်း 1975 ခုနှစ်မာရီက Short အိမ်၏ကြမ်းခင်းအစီအစဉ်။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. www.ozetecture မှာတူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture ထုတ်ဝေသော Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားစဉ်းစား။ org / 2012 / Marie-Short-Glenn-murcutt အိမျ / (အဆင်ပြေအောင်)
အဆိုပါ client ကို, မာရီက Short အလွယ်တကူ disassembled နှင့်အခြားနေရာများတွင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပြီးနိုင်မယ့်အိမ်ကငျြတယျ။ သြစတြေးလျဗိသုကာပညာရှင် Glenn Murcutt မှတစ်ဦး cue ယူ ဂျပန် Metabolists ထိုသူနှစ်ယောက်တကွတဲ၏အသီးအသီးအဘို့အပွင့်လင်းပင်လယ်အော်အပါအဝင်ခြောက်ဦး cubicles, ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါလာရောက်ပူးပေါင်းစင်္ကြံ, ဒီမှာတံခါးများနှင့်အတားအဆီးများတစ်စီးရီးအတူနောက်ပိုင်းတွင် Murcutt အိမ်သူအိမ်သားဒီဇိုင်းများအတွက်ပုံပေါ်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုချဉ်းကပ်သည်။
Murcutt သိသာဒီဒီဇိုင်းကိုအတူပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။ သူကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုယ်သူများအတွက် Marie က Short အိမ်ဝယ်ကိုးဖို့ခြောက်လပင်လယ်အော်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ 1980 ခုနှစ်မူရင်း 1975 ခုနှစ်အစီအစဉ်အပေါ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
Glenn Murcutt အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မာရီက Short အိမ်၏မြှောင်းပုံခေါင်မိုးများနှင့်ဘက်မြို့ရိုးကို louvers ၏အသေးစိတ်။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. www.ozetecture မှာတူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture ထုတ်ဝေသော Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားစဉ်းစား။ org / 2012 / Marie-Short-Glenn-murcutt အိမျ / (အဆင်ပြေအောင်)
ဒီဒီဇိုင်းမော်ဒယ်၏ Murcutt ရဲ့ကွပ်မျက်သည့်မာရီက Short အိမ်ဗိသုကာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဗိသုကာကျောင်းသားများအနေဖြင့်လေ့လာခဲ့ခံရဖို့တစ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
ဒါဟာအစကိုတုပထားပြီးတဲ့အိမ်သူအိမ်သားဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူရသောအခါ Frank Gehry သွပ်ရည်စိမ်မြှောင်းပုံသံမဏိကိုအသုံးပြု 1978 ၌သူ၏ကယ်လီဖိုးနီးယားဘန်ဂလို remodeled ။ Gehry စတိုင်, သို့သော်, စက်မှုပစ္စည်း, မိမိစန်တာမော်နီကာ, ကယ်လီဖိုးနီးယားအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်တွင်အသုံးပြုမခံခဲ့ရပါဘူး။ Murcutt တစ် Pritzker ဆုရှင်ဖြစ်လာခဲ့မတိုင်မီ (အပိုင်းအတွက်) ဤတီထွင်မှု 1989-တဆယ်သုံးနှစ်ပတ်အတွက် Gehry တစ် Pritzker ဗိသုကာဆုကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိသုကာအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုကြားမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းများနှင့်နည်းစနစ်များပေါ်တွင်လွန်ကူးယူခြင်း, အသစ်သောအရာတစ်ခုခုဖွဲ့စည်းရန် tweaking နေကြသည်။ ဤသည်ဗိသုကာအတွက်ဒီဇိုင်းအနုပညာဖြစ်ပါတယ်။
Glenn Murcutt အားဖြင့်မာရီက Short အိမ်။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. www.ozetecture မှာတူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture ထုတ်ဝေသော Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားစဉ်းစား။ org / 2012 / Marie-Short-Glenn-murcutt အိမျ / (အဆင်ပြေအောင်)
အဆိုပါမာရီက Short အိမ် Kempsey, ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ၏မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မာရီယာမြစ်တလျှောက်တွင်မြေကွက်တစ်ကျေးလက်လမ်းပိုင်းပေါ်တွင်နီးပါး3ပေမြေပြင်ကိုချွတ်, ခြေတံရှည်အပေါ်သတ်မှတ်။ ဒါဟာမဆိုသြစတြေးလျ woolshed အဖြစ်ဆောက်လုပ်ထား post ကို-and ရောင်ခြည်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒေသခံကျွန်းသစ်၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်သြစတြေးလျလယ်ယာအဆောက်အဦတူပါဘူး, ဒီအတှကျမာရီက Short အိမ်ကြပါစေယင်းဗိသုကာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
ခေါင်မိုးသာမန်မြှောင်းပုံသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့် eaves နေရောင်ကနေအအေးအမိုးအကာပေး။
Pritzker Prize ကို-အနိုင်ရဗိသုကာပညာရှင် Glenn Murcutt အဆိုပါမာရီက Short အိမ်များအတွက်ဒေသခံကျွန်းသစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အန်သိုနီ Browell နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ Glenn Murcutt နှင့်တူတူဒရော, ဂျပန်, 2008 ကထုတ်ဝေတဲ့စဉ်းစား Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing ၏ဗိသုကာထံမှလှီးဖြတ်
Glenn Murcutt ရဲ့အိမ်၏တစ်ဦးချင်းစီက၎င်း၏တိကျတဲ့တည်နေရာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည်ဗိသုကာ element တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအိမျတျောကိုဒီဇိုင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကိုမဆိုလိုပါ။ အဆိုပါမာရီက Short အိမ်မှာရှိတဲ့ element တွေကိုဆက်ဆက် Murcutt ကဒီဇိုင်းသည်အခြားနေအိမ်များမှာတွေ့ရှိကြသည်, သို့သော်လသာပေါက်ဆောက်လုပ်ရေးအမြဲ "ဟုအဆိုပါနေရောင်လိုက်နာပါ။ " ဦးမည်
Murcutt ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် louvered နံရံများအပါအဝင်ကမ္ဘာတဝှမ်းမြို့ပြမိုးမျှော်တိုက်အတွက်ကိုတုပထားသည်ကြောင်းသြစတြေးလျဒီဇိုင်းအပိုငျးအများမှာ The New York Times အဆောက်အဦး က New York City နှင့်ထဲမှာ Agbar မျှော်စင် ဘာစီလိုနာ, စပိန်၌တည်၏။
"လေတိုက်နွေရာသီအတွက်မှုတ်သောအခါ, တကအံ့သြဖွယ်အအေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်" ဟု Murcutt သူ့အိမ်၏ကပြောပါတယ်။ "ဆောင်းတွင်းမှာ louvers တက်အပူတဲ့သဘောထားကိုရှိသည်, သင်နံနက်၌သူတို့ကိုဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့နောက်ကျောနွေးနိုင်တယ်။ "
အဆိုပါမာရီက Short အိမ်တစ်တစ်သက်တာကျော်ကသူ့အလုပ်အကြောင်းကြားထားပြီး Glenn Murcutt ရဲ့ရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ The New York Times မှတ်ချက်ချသကဲ့သို့, woolshed "ပညာရှိဒီဇိုင်းတစ်ခု template ကို" ဖြစ်ပါတယ်နှင့်, Glenn Murcutt နေဖြင့်အသွင်ပြောင်း, ဒီနည်းမနောရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ဗိသုကာဖြစ်လာသည်။
> ဂျင်မ် Lewis က, The New York Times, မေလ 20, 2007 က Native Builder [သြဂုတ်လ 21, 2016 တွင်ဝင်ရောက်]
>6ရဲ့ 02 ကနေစာသားနဲ့ပုံရိပ်တွေကို "Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာပညာ" မှခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်တူတူဒရော, ဂျပန်ထုတ်ဝေသော 2008 ခုနှစ်, ဓာတ်ပုံများ "Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing စဉ်းစား": အန်သိုနီ Browell ။ စာသား: Heneghan, Gusheh, Lassen, Seyama, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေနှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစား http://www.ozetecture.org/2012/marie-short-glenn-murcutt-house/ မှာ [ဝင်ရောက်သြဂုတ်လ 21, 2016]
> အန်သိုနီ Browell အားဖြင့်603 ခုနှစ်ဓါတ်ပုံများ တူတူဒရော, ဂျပန်, 2008, ယဉ်ကျေး Oz.e.tecture, ဗိသုကာပညာဖောင်ဒေးရှင်းကသြစတြေးလျ၏ရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Glenn Murcutt မာစတာအတန်းအစားကထုတ်ဝေတဲ့ Glenn Murcutt ၏ဗိသုကာထံမှ ယူ. Drawing / အလုပ်အဖွဲ့ Drawing စဉ်းစား www.ozetecture.org/2012/marie-short-glenn-murcutt-house/ မှာ (အဆင်ပြေအောင်);
အဆိုပါစွန်, အန္ဒြေ Geller ရဲ့နှစ်ချက် Vision ၏သိမ်းဆည်းနေ
အဆိုပါ Frey အိမ် II ကိုဓာတ်ပုံလှည့်လည်
တစ်ဦး Frank Lloyd Wright-အတုယူအိပ်မက်မူလစာမျက်နှာ Build
အဆိုပါအိမ် Wright မုန်း
အဆိုပါ Hollyhock အိမ်၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ခရီးစဉ်
သြစတြေးလျအတွက် Marika-Alderton အိမ်
အဆိုပါ Zimmerman '' New Hampshire မူလစာမျက်နှာ, တစ်ဦးက Usonian Classic
အဆိုပါ Elvis ပျားရည်ဆမ်းခရီး Hideaway
အမြင့်ဆုံးဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်ဝန်ဖျက်နှုန်းနှင့်အတူထိပ်ဆုံး 10 စတိတ်
'' အဆိုပါမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်း '' အကျဉ်းချုပ်
Predator မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်အခြားမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ (UAVs)
ယင်းကြိယာ "Apercevoir" Conjugate လုပ်နည်း (၏မျက်မှောက်ဖမ်းရန်)
ဆောင်းရာသီအတွက် Read မှကောင်းသောစာအုပ်များ
Nudibranchs အကြောင်း 12 အချက်အလက်
Louie Giglio အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အခမဲ့ Valentine Day ကိုဖယောင်းစက္ကူ
ယောဘသည် - သစ္စာရှိဆငျးရဲဒုက်ခ၏ကြားမှ
15 အလွန် Funny (နှင့်စှဲ!) YouTube ကိုလိုင်းများ
သင်က MBA ဘွဲ့ရလျှောက်လွှာနောက်ဆုံးရက်အကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
အီတလီကြိယာ conjugation: Cominciare
ဂရေဟမ် Crackers တီထွင်ဘယ်သူနည်း
Hanukkah နှင့်ဂျူးဘာသာမှ Related ပြင်သစ်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက် Pat ဆိုတာဘာလဲ
အဆိုပါ gladiator Movie, vs. ရောမ gladiator
တစ်ဦး Fluffbunny ဆိုတာဘာလဲ
အိမ်လုပ်ဇီဝများအတွက် Titration စမ်းသပ်ခြင်း
ဆမ် Snead Quotes